Electronic zvinoriumba Company, Electronic Chip Purchase - Xi Da
Imwe One Online Services
Kuonekwa mudziyo uye Quality Control System
XIDA Electronics harisi chete nokutengesa mumwe-chemabhazi zvemagetsi zvinoriumba, asi inobhadhara yakawanda mabasa unofanira kana uchishandisa zvigadzirwa. Kubvira pakagadzwa, kambani yakapa yepakutanga yemagetsi uye hwokugadzira rutsigiro kuurongwa vatengi kubvira 20+ maindasitiri.
midziyo yemagetsi Security(12%)
The Customers We Shumirai
XIDA Electronics ari pose nokutengesa zvigadzirwa, mabasa uye nzwisisika zvinogadzirisa vatengi vari paindaneti zvinoriumba bhizimisi uye tine ruzivo rwakakura munzvimbo foni, mashoko hurongwa, zvokufambisa, zvokurapa, maindasitiri uye nevatengi Electronics zvigadzirwa.
Kubvira pahwakagadzwa makore anopfuura 20 adarika, kambani kwagara vakanamatira nheyo "Customer First" uye nokupa "Uya vaifanira kubatsirwa kuti vatengi" nokupa vatengi dzaro chemhando yepamusoro uye kupfuura competitively akatemerwa mutengo zvinhu uye mabasa . XIDA Electronics chaitwa pakupa vatengi pamwe yakavimbika uye yepamusoro yepakutanga zvinoriumba pamwe yepakutanga kavha.